Sistemụ ikuku, Ventilation Equipment, Ventilation Unit - AIR-ERV
Xiamen AIR-ERV Technology Co., Ltd. Ọkachamara na nyocha & manufacturingzụlite na n'ichepụta ikuku ka ikuku mgbake ikuku site na 1996 na ụlọ nke anyị. Anyị enwegoro ngwa ọrụ ma soro ISO 9001: 2015 na Rohs nchedo gburugburu ebe obibi, nweta ISO9001: Asambodo Sistemụ Ogo Ogo na asambodo OA wdg. nsọpụrụ inye ọrụ OEM ma ọ bụ ODM maka ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ama ama, dịka GE, Daikin, Huawei wdg, wee nweta ezigbo aha n'ụlọ na mba ofesi nwere oke ọnụ ahịa na ọnụ ahịa dị mma. ohuru / ọcha / ikuku di nma ma chekwaa oku / ike. Emetụta COVID-19, ọcha ume mgbake ventilator na UV nwoke ịga ụlọ ọgwụ bụ ọzọ na ndị ọzọ na-ewu ewu na ihe dị mkpa na-acha akwụkwọ ndụ building.Our anyị ikuku efere okpomọkụ Exchanger cores na ọtụtụ-eji HAVC, telekomunikashions, electric ike, akwa, ụgbọala, nri, ọgwụ. , oru ugbo, ulo oru anumanu, ihicha, ịgbado ọkụ, igwe mmiri na ulo oru ndi ozo maka ikuku ikuku, mgbake ike, obi jụrụ, ikpo oku, ikpo oku na ikpochapu oku.Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ mkpa, nabata ịkpọtụrụ anyị, ekele
ERV Okpomọkụ Recovery Vent ...
ERV Okpomọkụ Iweghachite Ventilator na nchacha ERV Okpomọkụ Iweghachite Ventilator na Nchacha ọ bụghị naanị wuru na-ukwuu oru oma okpomọkụ Exchanger naghachi okpomọkụ na-azọpụta ike, ma tinye isi nyo, nọ n'ọrụ carbon nyo na HEPA nyo n'ụzọ dị irè iyo ájá, bacteria na ndị ọzọ na-emerụ ihe na ikuku, PM2.5 ọcha arụmọrụ bụ ruo 99,5%. A na-eji ya maka villa, ụlọ akwụkwọ, ụlọ cafe, ime ụlọ nzukọ, ọfịs, ụlọ nkwari akụ, ụlọ nyocha, KTV, klọb mgbatị ahụ, sinima, okpuru ulo, ime ụlọ anwụrụ ọkụ na ndị ọzọ ...
Standard Heat na Ener ...
Standard Heat na Energy Recovery Ventilator Energy mgbake ventilators bụ Central ventilashion usoro na-enye ọhụrụ ikuku, wepụ ime ụlọ stale ikuku na itule iru mmiri n'ime a ụlọ. E wezụga nke ahụ, ha nwere ike iji ọkụ natara site na ikuku ochie iji kpoo ikuku dị ọcha na okpomọkụ dị mma. Nke a abughi naanị na-enyere aka ịmepụta gburugburu ebe dị ọcha ma dị mma nke na-eme ka ahụike nke ndị ọrụ ụlọ na-eme ka ọ dịkwuo mma, kamakwa weghachite ike ịchekwa ike. Nhọrọ: 1.Sensible aluminom ...
Ugboro abụọ Way Ventilator ...
Ugboro abụọ nke Ventilator - ọkọnọ na ikpochapu ikuku n'otu oge A ga-eji ventilashị ụzọ abụọ nye ikuku na ikuku na-ekpochapu n'otu oge, ọ nwere ike iwepụta ikuku dị ọcha n'ime ụlọ mgbe ikuku dị n'èzí iji melite nsị ikuku. Ugbo ala AC nwere ikike di ala na obere mkpọtụ. Standard iku ọkụ mgba ọkụ ma ọ bụ ọgụgụ isi njikwa maka nhọrọ. Njirimara: 1. Wide ngwa: na airflow nso bụ 150 ~ 5,000 m³ / h, adabara akwụkwọ, obibi, ogbako ụlọ, ọrụ, hotel, laabu, fi ...
Otu ụzọ Ventilator ...
Otu Vzọ Ventilator - nye ikuku ma ọ bụ ikuku na-ekpochapu Otu ụzọ a ga-eji ventilashị rụọ ọrụ na ikuku ma ọ bụ sistemụ ikuku ikuku. Nhọrọ: 1.Brand DC moto ma ọ bụ AC moto maka nhọrọ. 2.Three oyi akwa nzacha maka nhọrọ. E nwere isi nyo + nọ n'ọrụ carbon nyo + HEPA nyo iji gbochie ikuku ruru unyi, HEPA nyo nwere ike n'ụzọ dị irè belata PM2.5 ma hụ na ikuku dị ọhụrụ ma dị ọcha. 3.Standard iku ọkụ mgba ọkụ ma ọ bụ ọgụgụ isi njikwa maka nhọrọ. Njirimara: 1. Ngwa zuru oke: ikuku ikuku bu 50 ~ 5,000 ...
ERA Cross Flow Okpomọkụ Ex ...
ERA Cross Flow Okpomọkụ Exchanger Core Cross eruba ...
ERB Counter Flow Okpomọkụ ...
ERB Counter Flow Okpomọkụ Exchanger Core Counter f ...
ERC Enthalpy Okpomọkụ Exch ...
ERC Enthalpy Okpomọkụ Exchanger Isi The ERC okpomọkụ ...
ERD Cross & Counter Flow Okpomọkụ Exchanger Core ...